Android 4.4(KitKat)၏ ပြားချပ်ချပ် 2Dပုံစံများ ထွက်ပေါ်လာ ~ The ICT.com.mm Blog
Android 4.4(KitKat)၏ ပြားချပ်ချပ် 2Dပုံစံများ ထွက်ပေါ်လာ
Googleမှ မကြာခင် ထုတ်လုပ်တော့မည့် Androidနောက်ဆုံး ဗားရှင်း ဖြစ်သည့် Android 4.4(Kit Kat)ရဲ့ ပုံစံအချို့ ထွက်ပေါ်လာ ပါတယ်။ အဆိုပါ ပုံတွေထဲမှာ Android 4.4ကို လက်ရှိထွက်ထားတဲ့ iOS 7လိုမျိုး ပြားချပ်ချပ်နဲ့ 2Dဒီဇိုင်းမျိုး တွေ့မြင်ရပြီး အပေါ်ဆုံးမှာ ရှိတဲ့ Status Barဟာလည်း လက်ရှိဖွင့်ထားတဲ့ Appပေါ် မူတည်ကာ အရောင်ပြောင်းလဲသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မူလက “Key Lime Pie”လို့ အမည်ပေးမယ်လို့ လျာထားတဲ့ Android 4.4ဟာ “KitKat”လို့ တရား၀င် အတည်ပြု နာမည်ပေးခဲ့ပြီး မကြာခင် ထွက်ရှိလာတော့မယ့် Nexus 5စမတ်ဖုန်းမှာ အသုံးပြုသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်လျက် ရှိပါတယ်။ အဆိုပါ စမတ်ဖုန်းဟာ Android 4.4ကို ပထမဦးဆုံး သုံးမယ့် စမတ်ဖုန်း ဖြစ်တာကြောင့် လူစိတ်၀င်စားမှု အမြင့်ဆုံး ဖြစ်နေကာ မျက်နှာပြင်အကျယ် ၅လက်မ၊ Snapdragon 800 Processor, LTE Band ၇ခုနဲ့ 802.11 ac Wi-Fiစနစ် စတာတွေပါ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပါ၀င်လာမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Newer ဘီလျံနာဂျော့ဆိုးရော့စ် သုံးကြိမ်မြောက်လက်ထပ်
Older မြန်မာနိုင်ငံမှ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီး၀လံကုန်ချောများ ကိုရီးယားသို့ တင်ပို့မည်
Sony က Xperia ဖုန်းများ ကို Android 4.4 KitKat ပေးပြီ
Sony က Xperia ဖုန်းများ ကို Android 4.4 KitKat ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူး နေ့ က ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပြီး Xperia Z Ultra, Xperia Z1, Xpe...
Android KitKat ကို အသုံးပြုသူ ၂.၅% ၊ Jelly Bean ကို အသုံးပြုသူ ၆၂% ရှိပြီ
Google က Android Version အသုံးပြုမှု စစ်တမ်းကို ထုတ်ဖော်ကြေညာလိုက်ပြီး Android OS အားလုံးမှာ KitKat ကို အသုံးပြုသူ ၂.၅% ရှိပါတယ်။ Jelly...
Motorola က Moto X , Droid Ultra, Maxx , Mini ဖုန်းတွေကို Android 4.4 Update ပေးမည်
HTC က သူ့ရဲ့ HTC One အသုံးပြုသူတွေကို Android 4.4 KitKat ကို Update ပေးဖို့အပြင်းအထန်ကြိုးစားနေသလို Motorola ကလည်း US Carrier အသုံးပြု...
Android 4.4 KitKat Apps တွေကို Jelly Bean Device တွေမှာ သုံးမယ်
Google က နို၀င်ဘာ (၁) ရက်နေ့ က Nexus5နဲ့ အတူ Android 4.4 KitKat ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ KitKat ဟာ Android Phone တိုင်းမှာ အသုံးပြုသင့...
Android 4.4 KitKat ရဲ့ Feature အသစ်များ
Google က Nexus5ကို ဒီနေ့စတင်ရောင်းချပေးလိုက် ပြီးနောက်ဆုံးထုတ် Android OS 4.4 KitKat ကို ထည့်သွင်းမောင်းနှင်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ မှတ်သား...
Android 4.4 KitKat အသုံးပြုထားတဲ့ Google ရဲ့ Nexus5ကို တရား၀င် ရောင်းပြီ
Google နဲ့ LG တို့ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Nexus5ကို ဒီနေ့၀ယ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း Google ကပြောကြားပါတယ်။ 16GB ကို $349 , 32GB ကို $...
အန်းဒရွိုက် 4.4က “KitKat”သာ မဟုတ်ခဲ့ရင်
Googleကတော့ ၎င်းတို့ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် အန်းဒရွိက်ဗားရှင်း 4.4ကို “KitKat”လို့ နာမည်ပေးလိုက် ပါပြီ။ တကယ်လို့ “KitKat”လို့ နာမည်မပေးခဲ့ရင်...
အန်းဒရွိုက်ဗားရှင်းအသစ် 4.4ကို “KitKat”ဟု အမည်ပေး
Googleမှ ၎င်းတို့၏ အန်းဒရွိုက်ဗားရှင်းအသစ် 4.4ကို “KitKat”ဟု အမည်ပေးလိုက်ပြီ ုဖြစ်သည်။ “KitKat”ဆိုသည်မှာ နာမည်ကြီး ချောကလက်တံဆိပ် တစ်ခု...
One thought on “Android 4.4(KitKat)၏ ပြားချပ်ချပ် 2Dပုံစံများ ထွက်ပေါ်လာ”
“Status Barဟာလည်း လက်ရှိဖွင့်ထားတဲ့ Appပေါ် မူတည်ကာ အရောင်ပြောင်းလဲသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့”
Like iOS 7????
you copy the whole os from ios.. is this not enough????